Dagaal Culus Oo Sababay Qaxoonti Badan Oo Ka Socda Xudduuda Turkiga Iyo Suuriya | Himilo Media Group
Dagaal Culus Oo Sababay Qaxoonti Badan Oo Ka Socda Xudduuda Turkiga Iyo Suuriya
Ras al-Ain, 13 Oct, 2019 (Himilo)-Dagaal culus ayaa ka socda magaalada ku taalla xudduuda Suuriya iyo Turkiga ee Ras al-Ain xilli ciidammada Turkiga ay howlgalo millatari ka wadaan waqooyi bari Suuriya.
Millatariga Turkiga ayaa waxay sheegeen in ay la wareegeen magaaladaasi, balse xoogaga Kurdiyiinta ayaa arrintaasi beeniyey.
Xukuumadda Turkiga ayaa sidoo kale waxa ay beenisay in ciidammadeeda ay bartilmameedsadeen ciidammada Mareykanka ka dib markii wasaarada gaashaandhiga Mareykanka ay sheegtay in ciidammadooda la soo weeraray.
Ugu yaraan 30 qof oo rayid ah ayaa la sheegayaa in la dilay isla markaana in ka badan 200,000 oo qof ay qaxeen afartii maalmood ee uu dagaaka socday.
Go’aankii Madaxwayne Donald Trump ee uu ciidammadiisa kaga soo saaray Suuriya ayaa waxa uu horseeday in Turkiga ay qaadaan tallaabo millatari.
Doorka muhiimka ah ee ay ka qaateen dagaalkii looga adkaaday ururka isku magacaabay dowladda Islaamka ayaa u sahlay dagaalyahannada YPG inay kasoo tallaabaan webiga ayna la wareegaan dhul ka tirsan Suuriya.
Xukuumadda Turkiga ayaa u aragta kooxda YPG in ay yihiin koox argagixiso ah.
Dhinaca kale, xukuumadda Madaxwayne Donold Trump ayaa waxa ay ka biya diiday qaabka uu ku socdo howlgalka Turkiga ee ka dhanka ah kooxda kuridiinta.
Wasiirka Maaliyadda Mareykanka Mr Mnuchin wuxuu sheegay inuu madaxweyne Trump uu amar uu ku bixiyey hindisaha sharciga cunaqabateynta looga rogayo Turkiga in la diyaariyo.
“Haddaan doonna dhaqaalaha Turkiga waan joojin karnaa”. Ayuu intaa sii raaciyey.
“Turkigu iney naf dad gooyaan uma oggolaaneyno, haddii aan u baahanno inaan cunaqabateyn saarnana waan sameyneynaa” Ayuu yidhi Mr Trump.
Cunaqabateynka uu damacsan yahay inuu Mareykanku saaro Turkiga ayaa loo badinayaa in madaxda dalkaasi lagu beegsado sida oo kalena bangiyada dhaqaalaha ugu weyn ku caawiyo dagaalkana iney qayb ka noqon karaan ayey sheegeen wakiillo ka kala socda xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee dalka Mareykanka.
Turkiga wuxuu dagaal uu ka wadaa dhul dhan 120 km oo u dhaxeeya xadka labada dal ee Suuriya iyo Turkiga.
Madaxweyne Erdogan wuxuu isna sheegay “dhan walba waxaa nooga imanaya digniino iyo cadaadis ku aaddan inaan dagaalka joojinno”. balse aanu dalka Turkiga “Mowqifkiisa marna ka laabaneyn”.